Qalabka fiyuusku wuxuu ka kooban yahay godad lagu soo qabto. badhanka riix, boodhka waardiyaha iyo xakamaynta. Waxaa jira saddex boos oo loogu talagalay godadka qabashada. loogu talagalay NH000-NH00, NH0-NH3, iyo fiyuusyada NH4.
Saldhigyadu waxay ka kooban yihiin dhoobada cufnaanta badan, guddiga cusbi u adkaysi u leh kuleylka iyo xirmooyinka qaabeysan ee qaab-dhismeedka furan. Shayga waxaa lagu muujiyey kuleylka wanaagsan ee quusaya, cufnaanta makaanikada sare, xiriir la isku halleyn karo iyo hawlgal fudud. Waxaa loo heli karaa dhammaan fiyuusyada NH000-NH4.
Waxaa jira laba nooc oo qaabab ah oo loogu talagalay nooca saldhigyada fiyuuska; Mid wuxuu ka kooban yahay qalabka xarkaha fiyuuska, Isku xirka fiyuusku waa
lagu rakibay xamuulka, ka dibna waxaa la gelinayaa xiriirada joogtada ah ee taageeraha / saldhigga. Ma jiro wax xambaara qaab-dhismeedka kale,
halka fiyuuska boolisku si toos ah loogu rakibay xiriirada ma guurtada ah ee taageere / saldhigga. Shirkaddu sidoo kale waxay ku soo saari kartaa saldhigyo kale oo aan caadi ahayn shuruudaha macaamiisha.
Ka dib markii kiiska lagu muday balaastigga uu ku qalabeysan yahay xiriiro iyo xiriiriyeyaal fiyuus ah, saldhigyada waxaa lagu sameeyaa alxamid ama xoqid labadaba oo awood u leh inay noqdaan kuwo wajiyo badan loo qaabeeyey. FB15C, FB16-3J, FB19C-3J, Rt19 waa qaab dhismeed furan, kuwa kalena waa qaab dhismeedka semiconcealed. Waxaa jira shan fiyuus oo cabbir ah oo la heli karo oo laga kala dooran karo isla saldhigga fiyuuska ee RT18N, RT18B iyo RT18C, Waxaa jira laba nooc oo khadadka dibedda ah ee loogu talagalay RT18N. Mid waa
lagu rakibay xiriiriyeyaasha fiyuuska iskuxirayaasha fiyuus ee cabbirka cabirka leh. Midda kale waa xiriiro furan oo joogto ah oo leh dhibco jaban. Qaybta saldhigga oo dhami way goyn kartaa awoodda. Saldhigyada Rt18 waa dhamaan tareenka 'DIN train' oo la rakibay, kuwaas oo ay ka mid yihiin 'RT18L' oo ay ku qalabeysan tahay qufulka badbaadada ee ka hortaga hawlgalka qaldan ee gobolka burburka.
Qalab fiyuus-qayb isweydaarsi ah oo laga sameeyay bir saafi ah oo lagu xiray kartoonka oo laga sameeyay dhoobada culus ee dhoobada ama dhalada ah. Tuubada fiyuuska oo ay ka buuxsantay ciid quartz nadiif ah oo kiimiko ahaan lagu daweeyay oo ah dhexdhexaad dhexdhexaadinta bakhtiiye. Dot-alxanka walxaha fiyuuska wuxuu ku dhammaadaa koofiyadaha wuxuu hubiyaa isku xirnaanta korantada oo la isku halleyn karo; Weeraryahanku wuxuu ku xirnaan karaa iskuxiraha fiyuuska si uu si dhakhso leh ugu hawlgeliyo micro-biiro si uu u siiyo calaamado kala duwan ama uu si otomaatig ah u gooyo wareegga. Fiyuuska khaaska ah sida ku cad Jaantuska 1.2 ~ 1.4 ayaa la bixin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Walxaha fiyuus-iskutallaabta ee is-bedbeddelka ka sameysan oo laga sameeyay bir saafi ah oo lagu xiray kartoonka oo laga sameeyay muraayadda epoxy ee heerkulka sare adkeysata. Tuubada fiyuuska oo ay ka buuxsantay ciid quartz nadiif ah oo kiimiko ahaan lagu daweeyay oo ah dhexdhexaad dhexdhexaadinta bakhtiiye. Dot-alxanka walxaha fiyuuska wuxuu ku dhammaadaa xirmooyinka mindida waxay hubisaa isku xirnaanta korantada oo la isku halleyn karo.
Walxaha fiyuuska ee iskutallaabta ka sameysan oo ka sameysan naxaas saafi ah ama qalin lagu xiray kartoonka oo laga sameeyay dhoobada culus ee loo yaqaan 'Fuse tube' oo ay ka buuxsan tahay ciid quartz nadiif ah oo kiimiko ah oo lagu daaweeyo. Dot-alxanka walxaha fiyuusku wuxuu ku dhammaadaa boosteejooyinka waxay hubisaa isku xirnaanta korantada ee la isku halleyn karo iyo foomamka geliya xiriirada nooca mindi. Muujiye ama gooldhaliye ayaa laga yaabaa inuu ku xirnaado iskuxiraha fiyuuska si uu u muujiyo goynta fiyuuska ama inuu siiyo calaamado kala duwan iyo inuu si otomaatig ah u gooyo wareegga.
Xiriiriyaasha koofiyadaha silsiladaha ee loogu talagalay qiimeynta illaa 60A, iyo xiriirada mindida ee loogu talagalay qiimeynta illaa 600A, Qalabka fiyuuska ee iskudhafan ee laga sameeyay aaladda zinc. Isticmaalayaasha si fudud ayey ugu beddeli karaan curiyaha fiyuuska gubay oo fiyuuskana mar labaad ayey u isticmaali karaan.
Qalabka kormeerka fiyuus
Waxay ka kooban tahay qaybaha soo socda: 1. Weerar yahanka dhalaalaya, 2. Bedelaha mikro (hal xiriir dhow oo caadi ah iyo hal xiriir furan oo furan), 3. Saldhig u ah weeraryahanka iyo badalka. Qalabka la socodka fiyuuska ayaa sida caadiga ah la siman hoosta daboolka xirmooyinka daboolka ee dhamaadka fiyuuska. Marka fiyuusku jabo, pin-ka wax lagu dhufto ayaa ka soo baxa weeraryahanka, microswitch ayaa riixay oo calaamadda loo diraa ama wareegga la gooyaa. Markaa masaafada udhaxeysa labada daraf ee dhejiska waxaa lagu hagaajin karaa xad gaar ah oo la mid ah fiyuusyada leh dherer kala duwan.